ဖူးနုသစ်: ရောက်တတ်ရာရာ မလက်ကာအကြောင်း
မလက်ကာဆိုတာ မလေးရှားနိုင်ငံထဲမှာ ရှိတဲ့ မြို့တစ်မြို့ပါ။ စင်ကာပူနဲ့ ကပ်လျှက်ရှိတဲ့ ဂျဟိုးပြည်နယ်ရဲ့ ဘေးက မလက်ကာ ပြည်နယ်ထဲမှာ ရှိပါတယ်။ စင်ကာပူကနေ ဆိုရင် ကီလိုမီတာ ၂၅၀ လောက် ဝေးပြီး ဘတ်စ်ကားနဲ့ သွားမယ် ဆိုရင် ၃ နာရီလောက် သွားရပါတယ်။ ဂျဟိုးကနေ ကွာလာလမ်ပူကို သွားတဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးရဲ့ နံဘေးမှာ ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လို ဆီမီးကွန်ဒတ်တာနဲ့ ဆက်စပ် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေအဖို့တော့ မလက်ကာက မကြာခဏ ရောက်ဖြစ်တဲ့ နေရာ တစ်နေရာပါ။ အဲဒီမှာ Vishay, Infineon နဲ့ NS (National Semiconductor) ကုမ္ပဏီတွေက ပိုင်တဲ့ စက်ရုံကြီး ၃ ရုံရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကုမ္ပဏီတွေ လှည့်ပတ်ပြောင်းနေပေမယ့် ဆီမီးကွန်ဒတ်တာနဲ့ မကင်းနိုင်တာမို့ ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်တွေ၊ စက်ရုံမှာ သုံးတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေ အတွက် မကြာခဏ ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်ထဲမှာ အရင်က ကျွန်တော်နဲ့ အမြဲ အတူတူ အလုပ်တွဲလုပ်နေကျ အီလက်ထရစ်ကယ် အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ သူက မလက်ကာ သားပါ။ (မာလကာသား မဟုတ်ပါ။ :D) သူ့ဆီကနေ မလက်ကာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို မကြာခဏ ဆိုသလို ကြားရတတ်ပါတယ်။ သူပြောပြဖူးတဲ့ တရုတ်နှစ်ကူး ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် က ဒီလိုပါ။ မလေးရှားမှာက ပြည်နယ်တိုင်းမှာ စူလတန် ဒါမှမဟုတ်ရင် ဒါတွတ် (Datuk) လို့ ခေါ်တဲ့ စော်ဘွားလိုလို ဘာလိုလို လူတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ မလက်ကာမှာ ရှိတာက ဒါတွတ်ပါ။ တစ်နှစ်တော့ မလက်ကာ ဒါတွတ်က တရုတ် နှစ်သစ်ကူးပွဲ လုပ်ဖို့ အတွက် တခြားပြည်နယ်တွေက ဒါတွတ်တွေ စူလတန်တွေ အားလုံးကို မလက်ကာ ပြည်နယ်ကို ဖိတ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူနဲ့ ပြည်နယ်ချင်း ကပ်လျှက် ဂျဟိုးပြည်နယ်က စူလတန်ကလည်း မလက်ကာကို လာပါတယ်။ ဂျဟိုး စူလတန်က မလက်ကာ ဒါတွတ်ကို "နောက်နှစ် ငါလာရင် တရုတ်နဂါး ကတာ မမြင်ချင်ဘူး။" ဆိုပြီး ပြောတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မလက်ကာ ဒါတွတ်ကလည်း ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ "မမြင်ချင်ရင် မလာနဲ့ပေါ့ကွာ။ နောက်နှစ် မင်းကို မဖိတ်ဘူး။" လို့ ပြောလွှတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့။ တရုတ်နှစ်ကူးမှာ တရုတ်နဂါးကတာ မမြင်ချင်ဘူး ဆိုတော့လည်း ဘယ်နှယ့် လုပ်ရပါ့ မလဲ။ အဲဒါနဲ့ နောက်နှစ်က စပြီး မလက်ကာမှာ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲ လုပ်တိုင်း ဂျဟိုး စူလတန် တစ်ယောက်က လွဲပြီး ကျန်တဲ့ သူတွေ အားလုံး လာကြတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော့် အရင်ကုမ္ပဏီက အင်ဂျင်နီယာများ မလက်ကာမှာ ချောက်ကျခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်လည်း ရှိပါသေးတယ်။ တစ်ခါက ကျွန်တော်နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အင်ဂျင်နီယာ ၂ ယောက် မလက်ကာက စက်ရုံမှာ စက်သွားဆင် ကြပါတယ်။ စက်က စက်ရုံမှာ စမ်းနေတုန်း PLC ကတ်ဒ်တစ်ကတ်ဒ် လောင်သွားပါတယ်။ ကတ်ဒ်လောင် သွားတော့ မှာထားတဲ့ ကတ်ဒ်အသစ် တစ်ကတ်ဒ် မရောက်မချင်း သူတို့ ဘာမှ လုပ်လို့ မရပါဘူး။ အဲဒါကို ဉာဏ်ကြီးရှင် ၂ ယောက်က ရွှေဉာဏ်တော် စူးကြပါတယ်။
စက်ရုံထဲမှာ သူတို့လာပြီး ဆင်တဲ့ စက်နဲ့ ပုံစံတူ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီက ရောင်းထားတဲ့ စက်တစ်လုံး ရှိပါတယ်။ အဲဒီစက်က ပရိုဒတ်ရှင်း အတွက် လိုင်းထဲမှာ သုံးနေတာပါ။ သူတို့က အင်ဂျင်နီယာတွေကို ပြောပြီး စက်ကို ပရိုဒတ်ရှင်း ခဏ ရပ်ခိုင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ စက်ထဲက ကတ်ဒ်ကို ဆွဲထုတ်ပြီး သူတို့စက်မှာ တပ်ကြည့်ကြပါတယ်။ ပြသနာကို မရှင်းဘဲ ကတ်ဒ် လဲထည့်တော့ နောက်ထပ်ထည့်တဲ့ ကတ်ဒ်ပါ လောင်သွားပါတယ်။ အဲဒီမှာ အကြီးအကျယ် ပြသနာ တက်တော့တာပါပဲ။ ပရိုဒတ်ရှင်းထဲက စက်က သူ့လျာထားချက် ပြည့်အောင် သုံးနေရတာပါ။ အဲဒီစက်က သူတို့ ပယောဂနဲ့ ဆက်ပြီး သုံးလို့ မရတော့တဲ့ အတွက် ပရိုဒတ်ရှင်း ရပ်သွားပါတယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ အဲဒီလို စက်မျိုးထုတ်တာ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုတည်းပဲ ရှိပြီးတော့ အဲဒီစက်ရုံမှာလည်း လည်စရာကလည်း တစ်လုံးတည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ စက်ရုံက ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ အဲဒီ ၂ယောက်စလုံးကို သူတို့ စက်ရုံကို နောက်ထပ် ဝင်ခွင့်မပေးဖို့ ဘလက်ခ်လစ်စ် ကြေငြာ လိုက်ပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြား ကပ်စတန်မာ စက်ရုံမှာ အမည်မည်းစာရင်း ကြေငြာတာ ခံရဖူးတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေ အနေနဲ့ သူတို့ ၂ ယောက်စလုံး ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီမှာ ထူးထူးခြားခြား ပြောစမှတ်တွင် သွားပါတယ်။
Maritime Museum (Photo: wikimedia.org)
မလက်ကာဟာ UNESCO ရဲ့ ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရာ ဒေသအဖြစ် ကြေငြာချက် စာရင်းဝင်တဲ့ မြို့တစ်မြို့ပါ။ အဲဒါကြောင့် မြို့ထဲမှာ ကြည့်စရာ ရှုစရာ အတော်ပေါပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ အုန်းသီးကြီးများ တကားကား လုပ်နေတဲ့သူများ သွားသင့်တဲ့ မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်စရာ ရိုက်ကွင်း ကောင်းကောင်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ စင်ကာပူကနေ မလက်ကာ သွားဖို့ကတော့ သိပ်မခက်ပါဘူး။ ခရန်းဂျီး (Kranji) အမ်အာရ်တီ ကနေပြီး နံပါတ် ၁၇၀ ဘတ်စ်ကားကို ဂိတ်ဆုံး စီးသွားရင် ဂျဟိုးဘက်က လာကင်း(Larkin) တာမင်နယ်မှာ ဂိတ်ဆုံးပါတယ်။ အဲဒီကနေ မလက်ကာ သွားတဲ့ အဝေးပြေးကား တက်စီးရင် ၃ နာရီလောက် စီးရပါတယ်။ မလေးရှား ရင်းဂစ် ၂၀ လောက်ပဲ ကျပါတယ်။ အဲဒီလို ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေ လုပ်မနေချင်ဘူး ဆိုရင် စင်ကာပူ လာဗန်ဒါး (Lavender) နားမှာရှိတဲ့ ဂိုးဒင်းမိုင် အဆောက်အဦး (Golden Miles Complex) ကနေ မလက်ကာ ကားကို တိုက်ရိုက် စီးသွားလို့ ရပါတယ်။ ကားနဲ့မောင်းသွားမယ် ဆိုရင် စင်ကာပူ ကနေ ကွာလာလမ်ပူ သွားတဲ့ ဟိုင်းဝေးလမ်းကနေ အထဲကို နည်းနည်း ဝင်ရပါတယ်။
ဘလော့ခ်ပေါ်တင်ဖို့ ဓာတ်ပုံတွေ ကြိုးစားပမ်းစား ရိုက်ကြည့်ပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့လည်း ထုံးစံအတိုင်း အင်တာနက်ကနေပဲ ရှာပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီသင်္ဘောကြီး ဘေးက ဖြတ်သွားတဲ့ အချိန် ညဖက်မို့ မီးတွေနဲ့ အတော်လှပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကားပေါ်က ရိုက်ရတာ တစ်ကြောင်း ဘလက်ဘယ်ရီက ကင်မရာက ညဖက် ရိုက်လို့ မကောင်းတာ တစ်ကြောင်းမို့ ကြည့်ဖို့ အဆင်ပြေတဲ့ပုံ မရလိုက်ပါဘူး။ အဲဒီနား ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဓာတ်ပုံ ရိုက်လို့ အတော်ကောင်းတယ် ဆိုတာတော့ သတိထားမိလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ညဖက် နွန်ယာ (Nonya) အစားအသောက် သွားစားရင်း အဲဒီသင်္ဘော ဘေးကနေ ဖြတ်သွား ဖြစ်တာပါ။။ နွန်ယာဆိုတာက မြန်မာနိုင်ငံက ပန်းသေးတွေနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါ။ တရုတ် လူမျိုးဖြစ်ပြီး မလေး အင်ဒိုနီးရှား ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ကြီးပြင်းလာတဲ့ သူတွေပါ။ မလက်ကာမှာ နွန်ယာ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ သက်ဆိုင်တာတွေ အများကြီး ရှိပြီးတော့ နွန်ယာ အစားအသောက်ကလည်း အတော် စားလို့ ကောင်းပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ နွန်ယာ အစားအသောက် မြည်းကြည့်ချင် ရင်တော့ ဘူဂစ် ဂျန်းရှင်းနဲ့ မျက်စောင်းထိုးလောက် North Bridge လမ်းဘက် အခြမ်းမှာ နွန်ယာ ဘူဖေး ဆိုင် တစ်ဆိုင် ရှိပါတယ်။ သိပ်မဆိုးပါဘူး။ ဈေးကလည်း ၁၅ ဒေါ်လာ မကျော်တာမို့ စားလို့ တန်ပါတယ်။
မလက်ကာမှာ တခြား ဓာတ်ပုံရိုက်စရာ တူးမြောင်းတွေ၊ ၁၇ ရာစုက ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေ နဲ့ တခြား ရှေးခေတ် ပုံစံဆောက်ထားတဲ့ အဆောက်အဦးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ မလက်ကာ အကြောင်းကို ဒီမှာ ရပ်ပါဦးမယ်။
Posted by ZT at 2:50 AM
Labels: ခရီးသွား, မလေးရှား, အတွေ့အကြုံ
Nyonya ညြန္ညာေတြက Taoism လို႕ ထင္ခဲ့တာ..
အေမႊးတိုင္ထြန္းတာ စကၠဴမီး႐ိႈ႕တာေတြ လုပ္တယ္ေလ။ ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာေတာ့ ေခတ္အလိုက္ေျပာင္းမလား မေျပာတတ္ေတာ့ဘူး..
Paranakan ယဥ္ေက်းမႈက တစ္အိမ္နဲ႕တစ္အိမ္္လည္း နဲနဲစီကြာတယ္။
ဘေလာ့ခ္ေပါ္တင္ဖို့ ဓာတ္ပုံေတြ ျကိုးစားပမ္းစား ရိုက္ျကည့္ေပမယ့္ ထုံးစံအတိုင္း အလုပ္မျဖစ္ပါဘူး။ (ဟင္း. သြားၿပခ်င္စမ္းတယ္.)
မလကၠာေရာက္ရင္ေတာ့ ႏြန္ယာ (Nonya) အစား အစာ စားျဖစ္ပါတယ္၊
(Nonya) တုိင္းေတာ့ မြတ္ဆလင္ မဟုတ္ဘူးထင္တယ္၊
ဟုတ္ေလာက္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕တဝက္ ျဖစ္မွာပါ။ တရုတ္လူမ်ိဳး မေလး အင္ဒိုနီးရွား ယဥ္ေက်းမွုနဲ့ ၾကီးျပင္းလာတဲ့သူလို႕ ဆိုပါတယ္။